Ukwahlula kunye nemigangatho yemaski | JBH yezoNyango
Sitsalele umnxeba: 0086-18913356391
Ezilahlwayo Face Imaski
Ukwahlula kunye nemigangatho yeemaski
Isigqumathelo esilahlwayo sezoNyango: Isigqumathelo sezonyango esilahlwayo: Kufanelekile ukukhuselwa kococeko kwindawo yezonyango ngokubanzi apho kungekho bungozi bamanzi kunye nokutshiza, kufanelekile ekuchongeni isifo kunye nemisebenzi yonyango, kunye nokuhamba okuphantsi ngokubanzi kunye nokuxinana okuphantsi kwebhaktheriya yongcoliseko .
Isigqumathelo esilahlwayo esilahlwayo: Isigqumathelo esilahlwayo esenziwe ngotyando: Kufanelekile ngakumbi ekuthinteleni igazi, ulwelo lomzimba kunye nokutshiza ngexesha lotyando. Isetyenziselwa ukhuseleko olusisiseko lwabasebenzi bezonyango kunye nabasebenzi abanxulumene noko kumaziko onyango. Oochwephesha ngokubanzi kunye namasebe osuleleko Abasebenzi bezonyango ewadini kufuneka banxibe le maski.
I-N95: Umgangatho wokuphunyezwa kwaseMelika, oqinisekiswe yi-NIOSH (iZiko leLizwe lezoKhuseleko eMsebenzini kunye neMpilo)
I-FFP2: Imigangatho yesigqeba yaseYurophu, ethathwe kumgangatho olawulayo wamazwe angamalungu e-EU ngokudibeneyo aphuhliswa yimibutho emithathu kubandakanya iZiko leMigangatho yaseYurophu. Iimaski ze-FFP2 zibhekisa kwiimaski ezihlangabezana nomgangatho waseYurophu (CEEN1409: 2001). Imigangatho yaseYurophu yemaski ezikhuselayo yahlulwe yangamanqanaba amathathu: i-FFP1, FFP2, kunye ne-FFP3. Umahluko kumgangatho waseMelika kukuba inqanaba lokuhamba kobhaqo liyi-95L / min, kwaye ioyile ye-DOP isetyenziselwa ukuvelisa uthuli.
P2: Imigangatho yokuphunyezwa kwe-Australia ne-New Zealand, ethathwe kwimigangatho ye-EU
I-KN95: I-China ikhankanya kwaye isebenzise imigangatho, eyaziwa njenge "mgangatho wesizwe"
Ixesha Post: Jul-23-2020
imaski yomlomo wobuso, iibhedi zononophelo, ibhedi yamandla esibhedlele, ibhedi yokulala kwizigulana, ezilahlwayo kwezonyango, ibhedi esibhedlele ngokuzenzekelayo,
Anhui JBH Medical Izixhobo Co., LTD
Iindidi zeebhedi zesibhedlele
Isibhedlele esibhedlele ngokubanzi sibhekisa kwibhedi yabongikazi, eyilelwe ngokweemfuno zonyango kunye nemikhwa yokuphila ebhedini, kwaye yenzelwe amalungu osapho ukuba ...
Imisebenzi kunye neentlobo zokunyusa isigulana
Umsebenzi wokuphakamisa abaguli abafe umzimba: Ukuhambisa abantu ngokuhamba okungahambiyo ukusuka kwenye indawo uye kwenye kunokuphakamisa isigulana ukusuka emhlabeni ukuya ebhedini; iinyawo zekrisimesi zinokuvulwa ...
Ezilahlwayo Isigqumathelo sezoNyango: Imaski yonyango enokuthi ilahlwe: Kufanelekile ukukhuselwa kococeko kwindawo yezonyango ngokubanzi apho kungekho bungozi bamanzi kunye nokutshiza, kufanelekile ...
ibhedi yamandla esibhedlele, imaski yomlomo wobuso, ezilahlwayo kwezonyango, ibhedi yokulala kwizigulana, iibhedi zononophelo, ibhedi esibhedlele ngokuzenzekelayo,